Indlu yasemapulazini phakathi kwe-Girona ne-Costa Brava - Room Remington - I-Airbnb
Indlu yasemapulazini phakathi kwe-Girona ne-Costa Brava - Room Remington
Ikamelo e-indlwana ibungazwe ngu-Nani
U-Nani Ungumbungazi ovelele
Uyemukelwa eMas Teixidor, indlu yasepulazini yekhulu le-17 etholakala eCaldes de Malavella. Indawo ekahle yokuphumuza umoya, ukuphumula, ukuhamba ngezinyawo… ilungele ukuza nophathina wakho noma izingane.
Uzoba nekamelo langasese elinendlu yokugezela.
Imizuzu engu-10 nje ukuhamba kusukela esiteshini sesitimela, kusukela Mas teixidor unayo Spas of Caldes, idolobha Girona kanye Costa Brava ngaphakathi ibanga uhamba ... Uma ufuna ukuchitha impelasonto ukujabulela, lokhu ekhaya lakho⁇
I-Mas Teixidor iyikhaya lethu… kanye nekhaya lakho, futhi uzoyiqaphela ngezici ezinjengokuhlobisa, ukunethezeka, ububanzi… okuzokwenza uzizwe usekhaya. Amakamelo avuselelwe, anakho konke ukunethezeka (ukushisisa, igumbi lokugezela elihle, i-wifi ...) Sinegumbi eline-TV nemidlalo, elilungele ukubuka imuvi, izindaba, lowo mdlalo webhola obalulekile ...
Indlu nendawo yengadi yayo kubiyelwe, kuhle uma uza nezingane zakho. Futhi ngaphandle kocingo ipulazi linamasimu, amahlathi, ichibi elinamadada kanye nepulazi lethu elinezimvu.
Impelasonto ekahle yokuza nencwadi efanelekile, ukubalekela eGirona, ogwini lolwandle ... Futhi uma uhambisana nezingane, zizokwazi ukudlala nendlu yokhuni, igumbi lemidlalo, lithathe amaqanda izinkukhu futhi mhlawumbe unike iwundlu ibhodlela ... Unetafula le-pool, ibhola lezinyawo, i-basketball hoop, itafula le-ping pong nendawo eningi.
Izungezwe umgwaqo oluhlaza, ilungele ukuhamba ngebhayisikili isikhashana noma uhambo nje ...
Ungeza nenja yakho. Kunenkokhiso encane futhi KUBALULEKILE ukusazisa kusengaphambili ukuze sibone ukutholakala. Sanibona lapho!
Isifinyezo sendawo Indawo lapho indlu itholakala khona ihamba
phambili, njengoba sisondelene nakho konke futhi sikude ngokwanele ukuba sizizwe sihlukanisiwe. Ipulazi liwela ngendledlana eluhlaza, egcwele abagibeli bamabhayisekili, abagibeli bamabhayisikili, abahamba ngezinyawo... futhi indlu izungezwe amasimu namahlathi. E-7km sine- Cassà de la Selva, indawo yokungena e-Parc Natural de las Gavarres futhi siseduze ne-Massif de las las las Cadiretes, esisihlukanisa namadolobha afana ne-Tossa de Mar.
Indlu iwuhambo lwezinyawo olungu-15 'ukusuka enkabeni yedolobhana lase-Caldes de Malavella, nama-spa ayo amabili (i-Vichy Catalan ne-Balneari Prats) lapho ungajabulela khona iseshini enhle yokushisisa. Idolobhana elinokugijima okuthakazelisayo kwamaRoma futhi lijabulela wonke amasevisi abalulekile.
Ngaphezu kwalokho, sinesiteshi sesitimela esingasithinta, esilungele uhambo oluya e-Girona ngaphandle kokuthatha imoto. Yiqiniso, indawo endala yase-Girona inobuhle obuhle kakhulu futhi ayinayo imfucuza. Lapha, uma sikhuluma ngedolobha elinesipho esihle kakhulu sokuzilibazisa, isiko kanye nokudla.
Ekugcineni unebhishi 20'ngemoto. I-Plaja d ' Aro, i-Sant Antoni de Calonge, s 'Agaró, i-St. Feliu de Guíxols,... imizana ekhangayo, enempilo eningi kanye nokuhamba okubalulekile eceleni kolwandle.
Somos una familia con 3 niños, nos encanta estar cerca de la naturaleza, viajar, conocer lugares y personas nuevas, compartir experiencias, descubrir comidas diferentes...
Y nos gusta la idea de que nuestra casa, sirva de refugio para otras personas y que puedan disfrutar del increíble paisaje de Bagà, El parque natural del Cadí-Moixeró y tantas otras rutas maravillosas que se encuentran allí mismo.
UNani Ungumbungazi ovelele